Phatha izinhlelo zokusebenza uthathe izifinyezo kuFirefoxOS nge-ZTE Open | Kusuka kuLinux
Phatha izinhlelo zokusebenza uthathe izifinyezo kuFirefoxOS nge-ZTE Open
Njengoba iningi lenu selazi, nginefoni ezandleni zami I-ZTE Vula con I-Firefox OS, futhi njengoba ngilungiselela ukubuyekeza, ngifuna ukushiya amanye amathiphu engiwafundile kulezi zinsuku.
1 Ukuphatha izinhlelo zokusebenza
2 Ukuthwebula isikrini
Ukuphatha izinhlelo zokusebenza
Kungidonsele ukunaka ukuthi, ukuba ngu- smartphone, ibingenayo inketho yokuphatha izinhlelo ezivulekile ngasikhathi sinye.
Lokho wukuthi, bengizovula isiphequluli ngokwesibonelo, bese ngivula enye into ngokuvala eyedlule. Engingakwazi ukuthi, ngokucindezela izinkinobho IKHAYA imizuzwana embalwa, bengikwazi ukuphatha zonke izinhlelo zami zokusebenza ezivulekile.
Ngolunye usuku kwenzeke kimi ukuthi "ngenhlanhla" ngithathe isithombe-skrini. Akunandaba ukuthi ngizame kangakanani, angitholanga ukuthi ngikwenze kanjani kuze kube namuhla. Kanjani?
Ukucindezela ngasikhathi sinye, ukhiye osheshayo IKHAYA nenkinobho Power (Khanyisa cisha)..
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Phatha izinhlelo zokusebenza uthathe izifinyezo kuFirefoxOS nge-ZTE Open
Amazwana ayi-44, shiya okwakho
Ifana ne-Android ngaleso sikhathi
Yebo, ekugcineni ngicabanga ukuthi iKernel iyefana ne-Android, kepha iguquliwe. Kakhulu kangako, ukuthi i-ADB iyasetshenziswa (noma ingasetshenziswa) ukuvuselela idivayisi 🙂
uma usebenzisa i-kernel efanayo ye-Android
ingabe i-aesthetics yeFirefox OS ibukeka iyinhle kakhulu, ijubane, ukusetshenziswa, njll.
Nge-256 MB ye-RAM neprosesa ye-1GHz, kushesha kakhulu. 😉
Ngikuthola kunelukuluku lokuthi kunjalo, ngoba kusekelwe enguqulweni esindayo ye-Android (ICS). Ilungele abafana beMozilla.
Ake ucabange ukuthi, ngenkathi isibuyekezo se-Android kungaba yi-1.4 GB, isibuyekezo seFirefoxOS asidluli ku-150 MB. 😀
Ngaphezu kokususa "isidla-insiza" seJava (Dalvik).
Iqiniso ukuthi, ngicabanga ukuthi iMozilla yenze umsebenzi omuhle. Njengoba ngishilo kokunye okuthunyelwe, manje njengoba iWhatsApp izotholakala ngaphambi kokuphela konyaka, angiboni nkinga ukuyithenga. Ngoba empeleni uhlelo lokusebenza engilusebenzisayo.
Nginokungabaza, izinhlelo zokusebenza ezasendaweni, ngabe zingama-webapps noma zombili? Uyawubona umehluko phakathi kokunye nokunye, ngaphandle kwesikhathi sokulayisha?
Sanibonani futhi ngilindele ukubuyekezwa!
Yebo, benza umsebenzi oncomekayo, kepha kunamaphuzu abuthakathaka. Isibonelo, abakakhiphanga ngokusemthethweni i-Build for the ZTE Open ngokusemthethweni, ngakho-ke yisikhathi sokuhlanganisa kusuka eGitHub.
Inkinga ukuthi, lapho ngiqala ukuhlanganisa, ithumela kimi ukuthi ngibheke iskripthi ku-googlecode futhi lapho konke kufihliwe, ngoba iCuba ayinakho ukufinyelela. Ama-Geekphones anokwakhiwa okutholakalayo ukuze kulandwe.
Ngaphandle kwalokho, kuhle kakhulu. Futhi bathi ngezinhlobo ezintsha konke kuyathuthuka, ukusebenza, imiphumela ...
Ndoda, angazi ukuthi udaba lunjani eCuba, kepha ingabe umuntu angakuthumela iskripthi esivela ngaphandle? Noma bekungaba yize?
Noma kunjalo, okuthile okungenza ngisolise nge-FxOS ukuthi izinhlelo zokusebenza zingama-webapps. Lokhu kungenza ngingathembi kancane. Iqiniso lokuthi konke kukuwebhu.
Ngicabanga ukuthi ngokufaka okujwayelekile ngeke kwenzeke, akunjalo? Ngithi ngalezo Zocingo, i-SMS, ...
I-WebApps ayifani newebhusayithi ... izinhlelo zokusebenza zisebenza endaweni futhi kungaleso sikhathi lapho kufanele siphule khona ukuze kungabe kusabakhona ukwethembana kweFirefox OS
Kuzinhlelo zokusebenza, yebo, ezinye zasendaweni, ezinye ezibhekene ne-Intanethi. Okwendawo engikusebenzisayo: Nge-Backup egcina engixhumana nabo kwi-MicroSD, naku-Explorer, ukubona amafayela aku-MicroSD futhi asebenza kahle.
Ngiyethemba ukuthi iphrojekthi yeCanonical "Ubunto Ucingo" yehluleke ngokuphelele.
Ubuntu buseseLinux phela ...
I-Achtung!: Akusona isibindi leso. Isibindi sangempela sinakho I-Gravatar (Ukuze uthole, hamba ngaphezulu kwe-avatar bese ubona ukuthi iphrofayili yeGravatar iyavela)
Izifiso zakho zizogcwaliseka (sezivele zehlulekile ngokwezezimali nge-Ubuntu Edge).
Ngiyakhumbula ukuthi ngaphambi kokuthi ubukhuthele kakhulu lapha
Damn angifundanga ukuphawula
I-Epic Fail xD
Ngikholwe futhi okwesikhashana. Manje, kubonakala sengathi umkhohlisi ofanayo ufake enye imvunulo.
[I-Catfish mode: ivuliwe]
Uma ngikhuluma iqiniso, angiqondanga ukuphawula kwakho, ngicabanga ukuthi usho ukuthi nginesibindi, akunjalo? Ok, kunjalo hahaha uma lokho kuhleka, uyiphutha elincane!
Angicabangi ukuthi uyaliqonda ihlaya lami (futhi kakhulu mayelana neCatfish, eyayiyidokhumentari ephathelene nomfana owathandana nentombazane eyayizenza omunye umuntu).
U-Eliot Reyna kusho
Lokhu ngikubiza ngokuthi "ukufaka ezine."
[I-Catfish mode: icishiwe]
Phendula u-Eliot Reyna
Woza, woza uyeke ukusihlukumeza ... ungabe usamemezela ukubuyekezwa bese umane ukusishicilela, ngikulindele njengento enhle ...
UCharlie-Brown nami ngilangazelele lokho. Kuyangimangaza ukuthi kuhamba kahle nge-256 mb. Ngicabanga ukuthi iphutha lelo i-Android elidinga kakhulu inqama iyinjini ebonakalayo ye-dalvik nokuthi isebenza ngeJava. Angiqondi ukuthi abawukhanyisi kanjani….
Ngakolunye uhlangothi ngithemba ukubona ukuthi yini ezoba yigugu ne-tizen….
Ilinde Ukubuyekezwa okufanele ngiguqule iselula yami bese kwehla into efanayo.
Ngifuna ukuzama le OS ngolunye usuku.
Usuke ekubeni ungaboni mqondo ngokuba ne-WP ne-Lumia 520, washo ukuthi unentshisekelo yokuzama 🙂 Kuyisimangaliso sikaKhisimusi !!!
Ngathi ngifuna ukukuzama, hhayi ukuthi kunengqondo i-XDDD! Ngeke ngidayise ifoni yami yamawindi nganoma yini.
Siyakuhalalisela i-elav nge-ZTE Open yakho entsha, ngiyajabula ukuthi usuyalithola iqhinga 🙂 Qhubeka nale mihlahlandlela, ayilimazi.
Engingakulindela ku-firefoxOS ukuthi ingenziwa ngezifiso ngaphezu kwe-Android ngaphandle kwesidingo sezimpande. futhi ngaphandle kwemingcele yo-opharetha, kepha lelo iphupho nje lesikhashana.
Ilinde Ukubuyekezwa !!!!!!!!!!!!!!!!
Esithombeni sokugcina ungabona ilogo ye-DesdeLinux, ingabe ukufinyelela okuqonde ngqo ekhasini?
Ngabe i-facebook ilayisha kanjani? (kuyesabeka fb kepha kuyadingeka (?))
Sethemba ukuthi iWhatsApp izofika kungekudala, futhi ngethemba ukuthi kungekudala izotholakala e-Argentina.
Sawubona! Uyazi, ngizothenga ifoni entsha ezinsukwini ezimbalwa, futhi ngithanda ukwazi imininingwane yalo mshini. Abantu abaningi bathi iyiqembu elibi kunazo zonke, kepha ngilibona likhanga kakhulu futhi linezinzuzo eziningi, angiyena owe-geek futhi, ngingu-novice futhi engikukhethayo kungokwamaqembu alula ngandlela-thile. Ungangiphendula ngokulandelayo?
Kunjani ukuxhumana nesikrini sokuthinta? kuhamba kancane, kuyashesha?
kuvame kangakanani ukubuyekezwa? Ingabe ziyasebenza? Kukhona izinguquko? Ingabe kufanele ngibe nebhalansi uma ngifuna ukuvuselela?
Kubiza ukulanda i-facebook ku-MarketPlace ... noma kunesidingo yini ukuthi sibe necebo le-inthanethi ukuvula imakethe?
Ivolumu nomculo namasethingi e-alamu… ingabe kulungile ukuphakamisa ikhanda lokulala njengami? Ngiqonde ivolumu nokudlidliza nakho konke lokho.
Ezindaweni eziningi ngifunde ukuthi awukwazi ukushintsha iringithoni yezingcingo ... noma ngabe kunjalo, kwenziwa kanjani?
Ngiyethemba angizange ngikudubule ngemibuzo, yize ngicabanga ukuthi ngenzile, kodwa kungenxa yesizathu esihle! C: Ngiyabonga kusengaphambili!
Kusasa ngizokuphendula ngomoya ophansi .. Sanibonani
Empeleni konke kuya ngephuzu obukayo. Ngithola i-ZTE isiphetho esihle kakhulu (ngokwakhiwa nokusebenza) kwabantu abanamandla amancane okuthenga noma abafuna okuthile okulula.
Ukuphendula imibuzo yakho:
1- The Touch incike kunguqulo yeFirefoxOS oyifakile kanye nenombolo yezinhlelo zokusebenza ezivulekile, njengoba impendulo izobe iphakeme noma yehle ngokuya ngokusebenza. Ukuthi uma, noma kungahle kungabi yi-Galaxy noma i-iPhone, kwamukeleka impela.
2- Kuzo zonke izibuyekezo kunezinguquko. Unezindlela ezi-3 zokwenza:
- Noma linda izibuyekezo ezisemthethweni ze-ZTE, ezivame ukuhamba kancane.
- Noma usebenzisa i-ROM ehlanganiswe yilungu lomphakathi.
- Noma uhlanganisa i-ROM yakho.
3- Uma unendawo yokuxhuma nge-WiFi, awudingi uhlelo lwe-Inthanethi lwenkampani.
I-4- I-alamu iyinhlamba .. ngikholwe hahaha.
5- Kuyiqiniso ukuthi kuzinguqulo 1.0 kuya ku-1.2 awukwazi ukuguqula amathoni "kalula", kepha kusuka ku-1.3 ungabeka amathoni wesiko. Kuhlala kunendlela yokushintsha izinto lapho umkhiqizo uyi-OpenSource, kepha umsebenzi unzima ngandlela thile, ngoba kuzodingeka ubeke amanye amathoni asemthethweni lawo ofuna ukuwafaka.
Ngiyethemba ngikusizile 😉
Siyabonga nsuku zonke sithola izindlela eziningi zokuphatha le divayisi enhle kakhulu.
Sawubona Elav, ungalayisha okokufundisa kokuthi uyifaka kanjani i-FIrefox OS kwi-Samsung GT-S5830M, ngiyabonga kusengaphambili… Slds.
Nginomakhalekhukhwini kodwa akuyona into enkulu, ibanga eliphansi njengoba wazi, kepha liphansi kakhulu, kangangoba uma befuna ukusebenzisa izinhlelo eziningi futhi bashintshe uhlelo lokusebenza, ezinye izinhlelo ngokuvamile ivaliwe futhi angikuthandi nhlobo lokho (Njengesibonelo i-MAPS). Ngaphandle kwalokho iyahambisana nentengo yayo.
UDaniel Herrera kusho
Ngithenge iZTE Open kuV.1.1 futhi ngizokutshela izinto ezithokozisayo:
I-1- Ucingo, njengoba beseshilo vele, lububanzi obuphansi kakhulu, kepha intengo ilungile.
2- yize kunezinhlelo zokusebenza ezizokuphatha, izinhlelo zokusebenza zivaliwe, lokho kuyinkinga.
I-3- Okwamanje alukho uhlelo lokusebenza olusemthethweni lweWhatsApp, kepha akusho ukuthi ayikho i-WA yeFirefox OS, kunezinhlelo zokusebenza ezinjenge-OPENWAPP, i-CONECTA2 ne-LOQUI IM, zilungile, ngisho nakubadidiyeli bohlelo, i-whatsapp ekhasini layo elisemthethweni unikezela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zoMthombo Ovulekile.
I-4- isikhombimsebenzisi sihle kakhulu, iyashesha, kunzima ukubhala (okungenani kulabo abangasetshenziswanga ukuthinta njengami)
Ngokufingqa, ifoni enhle, kusobala ukuthi bazokhalaza ngoba abaningi babelindele okunye, kepha ngemuva kokuzwa kahle ukuthi AKUYONA ifoni esezingeni eliphakeme, KUNGENZEKA madoda, ifoni iphelele impela, yinhle kakhulu ngokwenziwe, okwabantu abafuna nje into entsha, elula, nezidingo zabo eziyisisekelo.
Phendula uDaniel Herrera
Lokhu okubhalile sekuvele kukubi
Uma lokhu ofuna ukukusho ukuthi sekuyaziwa vele, uqinisile, kuphela lapho ngibhala lokhu okuthunyelwe (esikhathini esithile esedlule) abaningi bebengakwazi. Ngalokhu ngiyakutshela mngani, ukuthi uma lokhu obufuna ukukusho bekuyikho lokho, ukuphawula kwakho akunangqondo.
Sawubona, bengifuna ukwazi ukuthi kungani ingamukeli inombolo yami yocingo ukuze i-whassap ingithumele ikhodi, ngivela e-Uruguay. Ngiyabonga
HAHAHA, bengibheke kakhulu kule foni ngaleyo ndlela futhi bengizishiyile ukuthi anginayo. Ngiyabonga kakhulu, yize ngisafuna enye ifoni ukuthola eminye imininingwane.
[HUMOR] ICanonical, Canonipple, Microsoftnical
Ungayifaka kanjani i-LAMP ku-Ubuntu